Los Angeles မြို့ဧရိယာ 4-တစ်နှစ်တာကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များ
အဆိုပါကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များခုနှစ်တွင်အကြောင်းနှင့် Los Angeles မြို့ခန့်ကိုလေ့လာပါ
သာ. Los Angeles မြို့ဧရိယာကိုတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များအချို့မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ အများပြည်သူတက္ကသိုလ်ကြီးကယ်လီဖိုးနီးယားရဲ့ system ကိုအထူးသဖြင့်ခိုင်ခံ့သည်, နှင့် Los Angeles မြို့ဧရိယာကိုကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်စနစ်များကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အများအပြားအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရွေးချယ်မှုမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးကိုအဘို့ငါမြို့တွင်း Los Angeles မြို့၏ 20 မိုင်ပတ်လည်အတွင်းခဲ့လေးနှစ် non-profit ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များပါဝင်သည်။
LA ကနေမိုင် 30 မှတ်ချက်, အ Claremont ကောလိပ်များ အများအပြား သာ. မြတ်သော options များဆက်ကပ်။ သင်တို့သည်လည်းငါ၏အစူးစမ်းနိုင်ပါတယ် ကယ်လီဖိုးနီးယားကောလိပ်များပြည့်စုံစာရင်း ။
ဒီဇိုင်း၏အနုပညာစင်တာတွင်ကောလိပ်။ seier + seier / Flickr ကို
တည်နေရာ: Pasadena, ကယ်လီဖိုးနီးယား
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်: 10 မိုင်
School တွင်အမျိုးအစား: ပုဂ္ဂလိကအနုပညာကျောင်းက
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: နှစ်ခုဗိသုကာလက်ရာမြောက်မှတ်သားဖွယ်ကျောင်းခွဲ; အလွန်အမင်းမှတ်စက်မှုဒီဇိုင်းအစီအစဉ်များ; အဆိုပါညမှာအနုပညာစင်တာနှင့်ကလေးများအဘို့အ Art Center မှတဆင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ
Biola တက္ကသိုလ်။ အလန် / Flickr ကို
တည်နေရာ:, La Mirada ကယ်လီဖိုးနီးယား
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်: 16 မိုင်
School တွင်အမျိုးအစား: ပုဂ္ဂလိကခရစ်ယာန်တက္ကသိုလ်
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: 145 ပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များ; 50 ကျော်ကလပ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတက်ကြွစွာကျောင်းသားဘဝ; ဆုရစကားပြောနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံအဖွဲ့များ; 17 1 မှ ကျောင်းသား / ဒြေအချိုး ; NAIA intercollegiate အားကစားအစီအစဉ်များ
: ပိုမိုလေ့လာရန် Biola တက္ကသိုလ်ကိုယ်ရေးဖိုင်
Caltech မှာ Beckman Institute မှ။ smerikal / Flickr ကို
တည်နေရာ: Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယား
School တွင်အမျိုးအစား: ပုဂ္ဂလိကနည်းပညာအဖွဲ့အစည်း
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: နိုင်ငံရဲ့တဦး ထိပ်တန်းအင်ဂျင်နီယာကျောင်းများ ; အထင်ကြီး31 မှကျောင်းသား / ဒြေအချိုး; ခိုင်မာတဲ့သုတေသနအစီအစဉ်များအတွက်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များ၏အသင်းအဖွဲ့ဝင်
: ပိုမိုလေ့လာရန် Caltech ကိုယ်ရေးဖိုင်
Caltech အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက် GPA, SAT နှင့် ACT ဂရပ်
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Dominguez Hills
Cal ပြည်နယ် Dominguez Hills ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
တည်နေရာ: Carson ကယ်လီဖိုးနီးယား
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်: 12 မိုင်
School တွင်အမျိုးအစား: အများပြည်သူတက္ကသိုလ်
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: အများထဲမှ 23 Cal ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်များ ; 45 ဘွဲ့အစီအစဉ်များ; လူကြိုက်များသူနာပြုနှင့်စီးပွားရေးအစီအစဉ်များကို; နိုင်ငံပေါင်း 90 ကိုကိုယ်စားပြုကွဲပြားခြားနားကျောင်းသားခန္ဓာကိုယ်; အဆိုပါ NCAA ရတိုင်း II ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ကယ်လီဖိုးနီးယား Collegiate အားကစားအစည်းအရုံး
: ပိုမိုလေ့လာရန် Cal ပြည်နယ် Dominguez Hills ကိုယ်ရေးဖိုင်
CSUDH အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက် GPA, SAT နှင့် ACT-ဇယား
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Long Beach
CSULB မှာ Walter ဟာပိရမစ်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
တည်နေရာ: Long Beach, California ပြည်နယ်
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်: 20 မိုင်
School တွင်အမျိုးအစား: ကြီးမားသောလူထုတက္ကသိုလ်
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: အထဲတွင် 23 ကျောင်းများ၏တဦးတည်း CSU system ကို ; အခန်း ဖိ Beta ကို Kappa ဟာလစ်ဘရယ်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံများတွင်အားသာချက်သည် ဖြစ်. , လူကြိုက်များစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို; အဆိုပါ NCAA ရတိုင်းကျွန်မ Big အနောက်ညီလာခံ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး
အဆိုပါကျောင်းပရဝုဏ် Explore: CSULB ဓာတ်ပုံလှည့်လည်
: ပိုမိုလေ့လာရန် Cal ပြည်နယ် Long Beach ကိုယ်ရေးဖိုင်
CSULB GPA, SAT နှင့် ACT အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက်ဇယားရမှတ်
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Los Angeles မြို့
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ် Los Angeles မြို့။ Justefrain / Wikimedia Commons
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်:5မိုင်
School တွင်အမျိုးအစား: ပြီးပြည့်စုံသောအများပြည်သူတက္ကသိုလ်
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: အအဖွဲ့ဝင် ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်စနစ်က ; စီးပွားရေး, ပညာရေး, ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားမျှတမှု, နှင့်လူမှုရေးအလုပ်အတွက်လူကြိုက်များအစီအစဉ်များ; In-ပြည်နယ်ကျောင်းသားများအတွက်ကောင်းသောတန်ဖိုး, အဆိုပါ NCAA ရတိုင်း II ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ကယ်လီဖိုးနီးယား Collegiate အားကစားအစည်းအရုံး
: ပိုမိုလေ့လာရန် CSULA ကိုယ်ရေးဖိုင်
Cal ပြည်နယ် Northridge ။ ပတေရုသ & Joyce ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း / Flickr ကို
တည်နေရာ: Northridge ကယ်လီဖိုးနီးယား
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: အများထဲမှ 23 Cal ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်များ ; 64 ဘွဲ့အစီအစဉ်များကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကိုးကောလိပ်များ; San Fernando ချိုင့်၌ 365 ဧကကျောင်းဝင်း; ဂီတ, အင်ဂျင်နီယာနှင့်စီးပွားရေးခိုင်ခံ့အစီအစဉ်များ; အဆိုပါ NCAA ရတိုင်းကျွန်မ Big အနောက်ညီလာခံအတွက်အရည်အချင်း
: ပိုမိုလေ့လာရန် Cal ပြည်နယ် Northridge ကိုယ်ရေးဖိုင်
CSUN GPA, SAT အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက်ဇယားရမှတ်များနှင့် ACT ရမှတ်
Loyola Marymount တက္ကသိုလ်
Loyola Marymount မှာသန့်ရှင်းသောနှလုံး Chapel ။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်: 15 မိုင်
School တွင်အမျိုးအစား: ပုဂ္ဂလိကကက်သလစ်တက္ကသိုလ်
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: ဆွဲဆောင်မှု 150 ဧကကျောင်းဝင်း; အဆိုပါများထဲမှ ထိပ်တန်းအနောက်ကမ်းခြေကောလိပ်များနှင့် uUniversities ; အနောက်ကမ်းခြေပေါ်တွင်အကြီးဆုံးကက်သလစ်တက္ကသိုလ်; ၏တဦးတည်း အမေရိကန်ထိပ်တန်းကက်သလစ်တက္ကသိုလ်များ ; 13 1 မှကျောင်းသား / ဒြေအချိုး; 144 ကျောင်းသားကလပ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ; အဆိုပါ NCAA ရတိုင်းကျွန်မ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး အနောက်ကမ်းခြေညီလာခံ
: ပိုမိုလေ့လာရန် Loyola Marymount တက္ကသိုလ်ကိုယ်ရေးဖိုင်
LMU အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက် GPA, SAT နှင့် ACT-ဇယား
MSMC မှာမာရိသည် Chapel ။ MSMC ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးရုံး / Wikimedia Commons
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်: 14 မိုင်
School တွင်အမျိုးအစား: ပုဂ္ဂလိကကက်သလစ်လစ်ဘရယ်အနုပညာကောလိပ်
ခွဲခြားထူးခြားချက်များ: 12 1 ကျောင်းသား / ဒြေအချိုး; အဓိကအားဖြင့်အမျိုးသမီးကျောင်းသားလူဦးရေ; ကို Santa မော်နီကာတောင်တန်း၏တောင်ခြေအတွက် 56 ဧကကျောင်းဝင်း; သူနာပြု, စီးပွားရေးနှင့်လူမှုဗေဒအတွက်လူကြိုက်များအစီအစဉ်များ
: ပိုမိုလေ့လာပါ တောင်ပေါ်မှာစိန့်မာရိရဲ့ကောလိပ်ကိုယ်ရေးဖိုင်
Occidental College မှာ
Occidental College မှာကျောင်းသားရေးစင်တာ။ ပထဝီ / Wikimedia Commons
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်:7မိုင်
School တွင်အမျိုးအစား: ပုဂ္ဂလိကလစ်ဘရယ်အနုပညာကောလိပ်
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: အတွေထဲက ထိပ်တန်းကယ်လီဖိုးနီးယားကောလိပ်များ ; မတူကွဲပြားသောကျောင်းသားကိုယျခန်ဓာ; အခန်း ဖိ Beta ကို Kappa ဟာလစ်ဘရယ်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံအတွက်ခိုင်မာတဲ့အစီအစဉ်များသည် ဖြစ်. , NCAA Division III အားကစားအစီအစဉ်များ
: ပိုမိုလေ့လာရန် Occidental College မှာကိုယ်ရေးဖိုင်
Occidental အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက် GPA, SAT နှင့် ACT-ဇယား
အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်း၏ Otis ကောလိပ်
အနုပညာနှင့်ဒီဇိုင်း၏ Otis ကောလိပ်။ Maberry / ဝီကီပီးဒီးယား
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: အထင်ကြီး71 မှကျောင်းသား / ဒြေအချိုးအစားနှင့်အသေးစားသင်တန်းများ; တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားရှိပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာကျောင်းမှ; ထိုကဲ့သို့သောကစားစရာဒီဇိုင်းအဖြစ်ပုံမှန်မဟုတ်သောအစီအစဉ်များ; ကျောင်းသားများကို interdisciplinary အကျိုးစီးပွားကိုလိုက်နိုင်ပါတယ်
ပိုမိုလေ့လာရန်: အနုပညာ Otis ကောလိပ်နှင့်ဒီဇိုင်းကိုယ်ရေးဖိုင်
UCLA ရဲ့ Powell စာကြည့်တိုက်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်: 11 မိုင်
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: အများ၏အစိတ်အပိုင်း တက္ကသိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယား system ကို ; အဆိုပါများထဲမှ ထိပ်တန်းအများပြည်သူတက္ကသိုလ်များ ; ၏တဦးတည်းမှအိမ်ပြန် ထိပ်ဆုံး 20 အင်ဂျင်နီယာအစီအစဉ်များ ; အခန်း ဖိ Beta ကို Kappa ခိုင်မာတဲ့လစ်ဘရယ်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံသည် ဖြစ်. , အဆိုပါ NCAA ရတိုင်းကျွန်မ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ပစိဖိတ် 10 ညီလာခံ
အဆိုပါကျောင်းပရဝုဏ် Explore: UCLA ရဲ့ဓါတ်ပုံကိုလှည့်လည်
: ပိုမိုလေ့လာရန် တက္ကသိုလ်ကယ်လီဖိုးနီးယား Los Angeles မြို့ကိုယ်ရေးဖိုင်
အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက် UCLA ရဲ့ GPA, SAT နှင့် ACT-ဇယား
USC Doheny သတိရအောက်မေ့စာကြည့်တိုက်။ ဓာတ်ပုံ Credit: Marisa ဗင်္ယာမိန်
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်: <1 မိုင်
School တွင်အမျိုးအစား: ကြီးမားသောပြည့်စုံပုဂ္ဂလိကသုတေသနတက္ကသိုလ်
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: သုတေသနအားသာချက်များအတွက်အမေရိကန်တက္ကသိုလ်များအဖွဲ့ဝင်များ၏အစည်းအရုံး; အခန်း ဖိ Beta ကို Kappa ဟာလစ်ဘရယ်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံများတွင်အစီအစဉ်များသည် ဖြစ်. , 130 ကျော်ကဘွဲ့ကြိုဗိုလ်ကြီး; အဆိုပါ NCAA ရတိုင်းကျွန်မ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး Pac 12 ညီလာခံ
အဆိုပါကျောင်းပရဝုဏ် Explore: USC ဓာတ်ပုံလှည့်လည်
USC အဆင့်လက်ခံရေးများအတွက် GPA, SAT နှင့် ACT-ဇယား
Whittier ကောလိပ်။ LesterSpence / Flickr ကို
တည်နေရာ: Whitter ကယ်လီဖိုးနီးယား
Downtown Los Angeles မြို့ကနေအဝေးသင်: 13 မိုင်
ခွဲခြားထူးခြားချက်များ: 13 1 ကျောင်းသား / ဒြေအချိုး; 40 ပြည်နယ်နှင့် 25 နိုင်ငံများထံမှကျောင်းသားများကို; 60 ကျော်ကလပ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတက်ကြွစွာကျောင်းသားဘဝ; NCAA Division III အားကစားအစီအစဉ်များ
: ပိုမိုလေ့လာရန် Whittier ကောလိပ်ကိုယ်ရေးဖိုင်
Woodbury တက္ကသိုလ်။ Dizzyprizzy / ဝီကီပီးဒီးယား
တည်နေရာ: Burbank ကယ်လီဖိုးနီးယား
School တွင်အမျိုးအစား: အသေးစားပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်
ခွဲခြားအင်္ဂါရပ်များ: ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံများ၏စိတ်နှလုံးထဲမှာသာယာလှပကျောင်းဝင်း; ဒီဇိုင်းနှင့်စီးပွားရေးခိုင်ခံ့အစီအစဉ်များ; 10 1 မှကျောင်းသား / ဒြေအချိုး; တက်ကြွဂရိဘဝ
: ပိုမိုလေ့လာရန် Woodbury တက္ကသိုလ်ကိုယ်ရေးဖိုင်
အဆိုပါ 8 အကောင်းဆုံးကောလိပ်လမ်းညွှန်စာအုပ်များ 2018 ခုနှစ်တွင်ဝယ်ယူ
တိုင်းအချိန်ကိုသင်စီးနင် Check အရာ
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး John C. Pemberton
အိတ်ဆောင် Keyboards & ဒစ်ဂျစ်တယ်စန္ဒရားနှိုငျးယှဉျ
မရှိမဖြစ်ဒါရိုက်တာ Woody Guthrie သီချင်းများ
မာတင်ဗန် Buren အကြောင်းသိထားမှ 10 အရာ
အားလုံးအချိန်များ၏ Scariest သရဲခြောက်သော
ယောဟနျသနျ Standard တစ်အတ္ထုပ္ပတ္တိ
Wallace v ။ Jaffree (1985)
အမေရိကန်တော်လှန်ရေး: Savannah ၏တိုက်ပွဲ
Pickup Truck ကားအိပ်ရာဖုံးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း Retrax
အဘယ်ကြောင့်အမျိုးသားများ cheat သလား?
ခြင် - မိသားစု Culicidae